Fepetra fitsangatsanganana vaovao any Seychelles noho ny variana Omicron COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Fepetra fitsangatsanganana vaovao any Seychelles noho ny variana Omicron COVID-19
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Fanambarana momba ny dia vaovao any Seychelles
Ireo mpitsidika avy any Afrika Atsimo, Eswatini, Lesotho, Mozambika, Namibia, ary Zimbaboe dia tsy mahazo miditra ao Seychelles manomboka anio sabotsy 27 Novambra 2021, mandra-pilaza bebe kokoa, hoy ny minisiteran'ny Fahasalamana Seychelles. Tsy nisy trangana variana B.1.1.529 hita tany Seychelles, nanamafy ny manampahefana ao an-toerana.
Nanamafy ny minisiteran'ny Fahasalamana fa mampihatra fepetra fitsangatsanganana vaovao ho an'ireo mpitsidika, teratany Seychelles ary mponina avy any amin'ny faritra atsimon'i Afrika noho ny karazana COVID-19 vaovao miparitaka any Afrika Atsimo sy ireo firenena manodidina azy.
Ho setrin'izany, ny kaompaniam-pitaterana Air Seychelles dia nanafoana ny sidina rehetra avy any Johannesburg mankany Seychelles afa-tsy ny 1, 17 Desambra ary 19 Desambra. ny sidina fiaingan'izy ireo.
Ny fepetra vaovao dia mitaky ny olona rehetra efa tany Seychelles izay efa tany amin'ireo firenena ireo tao anatin'ny tapa-bolana farany mba hanao fitiliana PCR raha toa ka tany Seychelles izy ireo nanomboka dimy (5) ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo (14) andro taorian'ny nahatongavany. Ireo izay efa tany Seychelles nandritra ny dimy (5) andro latsaka dia tokony hiandry ny andro faha-5 hanaovana ny fitiliana PCR.
Ny Seychelles sy ny mponina rehetra miverina any Seychelles izay efa tany amin'ireo firenena ireo tao anatin'ny tapa-bolana farany dia tsy maintsy manao confinement ary manao fitiliana PCR tsy maintsy atao amin'ny andro faha-5 aorian'ny fahatongavana.
Kivy mafy ny fitsangatsanganana any Afrika Atsimo sy ireo firenena hafa voatonona anarana.
Na dia tsy misy porofo aza fa hita ao Seychelles ny variana B.1.1.529, antsoina hoe Omicron avy amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana, dia nanoro hevitra ny manampahefana eo an-toerana fa tsy maintsy hajaina tanteraka ny fepetra rehetra momba ny fahasalamam-bahoaka sy ny fiaraha-monina.
Marihina fa mandray ny mpitsidika rehetra i Seychelles na inona na inona sata fanaony amin'ny vaksiny amin'ny fepetra fa manana taratasy fanamarinana fitiliana PCR ratsy COVID-19 izy ireo izay tsy maintsy alaina ao anatin'ny 72 ora alohan'ny handehanana, afa-tsy ireo mpitsidika avy any amin'ny firenena ao amin'ny lisitra voarara toy izao: Afrika Atsimo, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambika, Namibia ary Zimbaboe.
Tsy mila confinement ny mpitsidika miditra Seychelles. Na izany aza, entanina mafy izy ireo mba hanao vaksiny tanteraka alohan'ny handehanana. Avela hivezivezy malalaka izy ireo mandritra ny fialan-tsasatra manontolo, saingy tsy maintsy manaraka ny fepetra rehetra momba ny fahasalamam-bahoaka. Afaka mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny manana mari-pahaizana ara-pahasalamana ihany koa izy ireo raha toa ka manaraka ny protocole ara-pahasalamana rehetra misy ao amin'ireo trano ireo.
Ny fepetra fidirana farany sy ny fomba fiasa ara-pahasalamana ary koa ny lisitr'ireo mpandraharaha ara-pizahantany manana fahazoan-dàlana sy trano fonenana voamarina ho COVID-safe dia hita ao amin'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny sy ny fizahantany Tranokala ary Seychelles.govtas.com.